Mobius Jiro - Famolavolana
Jiro Ny peratra Mobius dia manome fitaomam-panahy amin'ny famolavolana jiro Mobius. Ny andian-jiro iray dia mety misy alokaloka roa (izany hoe lafiny roa-sisiny), ny vodiny ary ny mihemotra, izay hanome fahafaham-po ny fangatahana jiro manodidina. Ny endriny manokana sy tsotra dia misy hatsarana matematika mistery. Noho izany, ny hatsaran-tarehy mavokely kokoa dia hoentina eo amin'ny fiainana any an-trano.
Anaran'ny tetikasa : Mobius, Anaran'ny mpamorona : Kejun Li, Anaran'ny mpanjifa : OOUDESIGN.
Jiro Kejun Li Mobius